"Bristol" - ekhoneni usofa. Izici uhla
I ethokomele umndeni yokuhlala kumelwe nakanjani babe ifenisha samanje. Lena akuyona nje isiqinisekiso ilungiselelo ngempumelelo egumbini, kodwa futhi intela amasiko, njengoba indoda yesimanje ungeke ucabange impilo yami ngaphandle usofa ekhaya, imicamelo ongahlala kuso uma benethezekile ibhuku lakho olithandayo noma elawulwa kude, izihlalo evulekile nge yokubeka ezinkulu futhi Ukunquma luyakhukhumeza.
"Bristol" - ekhoneni usofa - Imfanelo esisemqoka kwanoma iyiphi ekhaya. Sofa akaconsi e izimpilo zezakhamuzi yethu. Lena indawo umzimba ukuphumula kanye umphefumulo, futhi kuyisikhathi imincintiswano umndeni ukubona ubani ozothatha isikhundla engcono-TV, kanti isizathu ukucabanga eside ngaphambi kokuthenga, ungasho, ilungu lomndeni ezingaphili.
Okokuqala, usofa kumele ihlangabezane izimfanelo eziningana ezibalulekile: ukusetshenziswa ukhululekile, amandla nokusebenza, idizayini enhle. Futhi uma intengo futhi kumnandi, lokhu okutholakele kungenziwa yaphumelela!
Kubalulekile ukuthi izilinganiso usofa bengasukumi yigugu kangaka Igumbi isikhala. A elula kuleli mayelana emincane SOFAS ukukhishwa kakhulu. Zenza imisebenzi emibili ngesikhathi esisodwa: ukunikeza endaweni esithambile esiphezulu nge okungenani imfuhlumfuhlu endaweni yokuhlala.
"Bristol" - ekhoneni usofa. Ububanzi iziphakamiso
"Bristol" - lena usofa emangalisayo onazo zonke izifiso amaklayenti abalwe ngenhla. Le nhlanganisela eyingqayizivele SOFAS, nezihlalo ezincane etafuleni ikhofi. Leli yithuba ukuhlangabezana nezivakashi endaweni enethezekile esiphezulu ingashintshwa ukuze izikhala ezincane lombhede.
Lokhu usofa ithuba abe double ukhululekile futhi ivulekile efulethini lapho awukwazi ukubeka embhedeni. Ekuseni, ungakwazi zijabulela inkomishi yekhofi kwesokudla embhedeni, usebenzisa itafula emangalisayo ekhoneni. Ngaphakathi kukhona emashalofini etafuleni, lapho ungakwazi ukugcina omagazini, amadokhumenti, okhiye, ifoni. Zonke izinto ezibalulekile kuyoba kutholakale kalula. A ingilazi yamanzi endaweni ababezolala kuyo ebusuku womile, imoto alamu inkinobho nobusuku obungamashumi ezinomoya, lehla ekhaleni stuffy, izibuko awaboni kahle, kuba ukusikisela okuwusizo kakhulu kusukela abaklami!
Buhle lokhu model
"Bristol" - usofa ekhoneni, compact ngakho futhi zisebenza kahle. It libhekene ukusebenza high. Ngokuyinhloko zenani isikhala ukonga. Lena okwamanje, okuyinto lufakwa izikali njengoba imfuneko eyinhloko.
Okwesibili - design imfashini, inqobo yizinhlobonhlobo esisebenzayo. It kufanela ngokuphelele esikhathini Interiors of izitayela ezahlukene kanye akusho bonakalise Umqondo oyisisekelo usofa design isikhala "Bristol".
Sofa ekhoneni, ngaphandle yini enye, kufanele kube elula. Imodeli okukhulunywa uyasenza lesi simo. ezihlalweni eziningi ukunikeza induduzo, futhi ikhono babeka usofa ikuvumela ukuthenga ke emibhangqwaneni asikwazi ukuba izindlu zabo kokubili embhedeni futhi lombhede.
okuqukethwe Wamathambo, imiklamo ekhethekile ukuba alondoloze ngeqholo nokusetshenziswa ukhululekile - enye plus esivuna yokufuna model of the usofa.
Uyini umbono abathengi?
amakhasimende amaningi afana usofa "Bristol" (ekhoneni), ukubuyekezwa ngakho ngokuvamile omuhle. Ukunganeliseki okubangelwa abakhiqizi musa banakekele ukusebenza ifenisha izinga, nezitolo ukuthi ngokungafanele enifeza ingxenye yabo umsebenzi, ezifana afeze ukulethwa ngesikhathi.
Mhlawumbe nawe uthanda kusofa "Bristol" isikhumba (ekhoneni futhi njalo), gobelin futhi velor. Kungakhathaliseki lwakho olukhethile, ungaqiniseka ngokuthi ikhwalithi ifenisha.
Usayizi elikhulu ekhoneni usofa ngoba egumbini lokuphumula. Usayizi embhedeni ekhoneni usofa
Kuyini ifenisha for usana? Imithetho kukhethwa ifenisha for usana
Ifenisha Igumbi zezingane intandane indlela yokwenza yokuzikhethela praviny?
Umbhede enganeni amantombazane: Princess Room.
Stylish ekhishini: ukubuyekeza nezincomo
Izinwele Commercial insipho - the "kochwepheshe" futhi "nebubi"
Umshini wokunyathelisa okuzenzakalela Kopisha DVD / CD / blu-ray Amadiski - Dexterix
Uyini compressor engcono: uwoyela noma amafutha-free? Incazelo, amalungelo akhe, kudivayisi Izibuyekezo
Indlela ukuhlela ilungelo lokulala? Izibonelo kanye Tips
Amaphrofayli Plastic ngoba PVC windows: isihloko, izibuyekezo, izilinganiso
Headphone ukubuyekeza Sennheiser HD 518: izici, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Onesimo okugeza 4x6: ukuwasha kanye ikamelo umusi ngokwehlukile. Onesimo 4x6 zokugeza ezinemigomo yokuphepha ehlukanisiwe umusi okugeza. Onesimo 4x6 zokugeza nge echibini ahlukene
Ihhotela Lou Lou a Beach Resort Indawo abantu 3 * (United Arab Emirates, Sharjah): izithombe, incazelo kanye ubukeza Abavakashi
Yemifino Raw: zinhlobo, ukuvuna, ukucubungula. amakhambi